Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya oo la Wareegay deegaano ka tirsan degmada Baraawe | SAHAN ONLINE
Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya oo la Wareegay deegaano ka tirsan degmada Baraawe
BARAAWE – Wararka aan ka helayno degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in Ciidamada Dowladda Soomaaliya la wareegeen deegaano dhowr ah ,waxaana socda sida lasoo sheegayo howlgallo ballaaran oo ciidamadu ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka.
Wararku waxay sheegeen ciidamada xoogga dalka ayaa Al-Shabaab ka qabsaday deegaano hoostaga Baraawe,halkaasoo ahayd goobaha Shabaabku weerarada kasoo qaadayeen.
Guddoomiyaha gobolka Shabellaha hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan Baraawe,wuxuuna kala hadlay xoojinta amniga.
Waxa uu sheegay in howlgallada ka socda gobolka ay yihiin kuwa Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay haystaan,wuxuuna labadii maalood ka socday gobolada dagaalo iyo duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Ururka Al-Shabaab ayaa aad ugu xooggan gobolka Shabeellaha hoose,waxaana la sheegaa iney tahay meelaha ay kasoo abaabulaan weerarada qaraxyada Ismiidaaminta eek a dhaca magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale.